शून्य लागतमा खुल्यो मलेसिया, के–कस्ता सुविधा पाउँछन् नेपाली कामदारले? – Jaljala Online
Posted on September 15, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
भदौ २९, काठमाडौं । १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी आजदेखि खुलेको छ। अब मलेसिया जाने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ।
पुडा’सैनी प्रकरण: प्रहरीसँगको बयानमा रविले के भने ? पढ्नुहोस
Posted on August 26, 2019 Author Jaljala Online
भदौ ९, काठमाडौँ । आत्मह’त्या दुरुत्साहन गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी रवि लामि’छाने प्रहरीसँगको बयानमा आफूले शालि’करामकी प्रेमिका भनिएकी अस्मतालाई नचिनेको बताएका छन् । यो खबर जनकराज सापकोटाले कान्तिपूरमा लेखेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन, ‘रुकु भन्ने अस्मितालाई मैले चितवनको थुनुवा कक्षमा मात्रै चिनेँ ।’ रविले आत्मह’त्याको दुई/तीन दिनअघि अस्मिता न्युज २४ […]
Posted on September 19, 2019 Author Jaljala Online
असोज २, दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ भञ्ज्याङमा बिहीबार दिउँसै गोली चलेको छ। यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । राप्ती राजमार्गअन्तर्गत अमेलीया–तुलसीपुर सडक खण्डको भञ्ज्याङमा गोली चलेको प्रहरीले जनाएको छ। एक राउन्ड गोली चलेको खोका घटनास्थलबाट बरामद भएको छ भने जंगी राउन्ड (लाइभ बुलेट) समेत फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता एवं […]